Wararkii Maanta: Aug 25, 2005
Xuseen Caydiid “Waxaan saddex sanno idin kaga maqnaa sidii aan uga takhalusi lahaa Cabdi Qaasim Salaad Xasan”
Khamri aad u fara badan oo laga keenay Dalka Itoobiya oo saakay lagu gubay Fagaaraha Tarabuunka
Xildhibaan Max’ed Xuseen “Ciidamada Itoobiya Xasuuq ayay ka geysteen deegtaanka Feer-Feer”…
Isbahaysiga Xoriyadda ra’yiga oo saakay lagu dhawaaqay
Xuseen Maxamed Ceydiid oo ah Ra’iisu Wasaare ku xigeen ka ah Dowladda Federaalka , ahna Wasiirka Arrimaha Gudaha ayaa shalay Hotel-ka Saxafi kulan gaar ah la yeeshay Siyaasiyiin, waxgarad, Culima’udiin, Nabadoono, dhalinyaro iyo Haween ka tirsan Beesha Sacad ee uu ka dhashay, wuxuuna kulankaasi ahaa mid uu Beesha si gaar ah uga warbixinayay muddadii sadexda sano aheyd oo uu Qurbo jooga ahaa, wuxuuna sheegay in mudadaas uu u maqnaa sidii uu uga takhalusilahaa ama uu jagada uga tuuri lahaa Madaxweynihii hore ee Soomaaliya C/qaasim Salaad Xasan.
Xuseen Caydiid | Sawirka: Reuters
“Kooxda Carta ee C/qaasim hor kacayay waxay igu soo qaadeen saddex weerar, waxayna iga dileen 37-ruux oo isugu jiray ilaaladeyda iyo taageerayaasheyda, arrintaasna waxaan hor dhigay UN-ka ama Qaramada Midoobay, waana iga iga aqbaleen Iin ay wax igala qabanayaan ” ayuu yiri Xuseen Ceydiid oo intaas sii raaciyay “Waxaan Muqdisho uga maqnaa markii aan u adkeysan waayay dilalkii iyo weeraradii lagu hayay taageerayaasheyda”.
Xuseen oo ay ka muuqatay qiiro uu ku soo jiidanayo Beeshiisa ayaa waxa uu sheegay in aakhiritaankii uu ku guuleystay in uu rido Madaxweyne C/qaasim Salaad Xasan, waxaana markiiba u dhacay sacab iyo mashxarad, hase ahaatee waxaa isla goobtii fadhiga arrintaas kaga carooday qaar ka mid ah xubnihii kulankaas ka qeyb galay oo iyagu dibada uga baxay fadhigii.
Xuseen Ceydiid mar uu Beesha kala hadlayay arrimaha Isbaaradda waxa uu yiri “Illaa dhallinyarada isbaarrooyinkaa jooga shaqo loo yeelo Isbaarrooyin lama qaadi karo, mana aha in waqtigan la yiraahdo Isbaarro ayaa la qaadayaa, waayo maa la qaado kuwa teedsan Afgooye illaa Kismaayo”. Xuseen mar uu ka hadlayay dagaallada u dhexeeya Beelaha Sacad iyo Suleymaan waxa uu sheegay in uu aad uga xun yahay dagaalladasi, balse lacago ay soo direen jaaliyada beesha ee dibadaha ay musuqmaasuqeen ama lunsadeen qaar ka ah siyaasiyiinta beesha, balse ma carrabaabin raggaasi, balse wuxuu ku gaabsaday “Maanta ayay nala fadhiyaan ragaas” isagoo sheegay in lacagahaas ay ahaayeen kuwo ay beeshu is ku difaacaysey.
Waxa kale uu ka Hadley arrimaha maxkamadaha islaamiga maadaama ay dhawaan beesha sameysatey Maxakamad Islaami ah oo lagu magacaabo Al furqaan wuxuu yiri “waxay doonayaan in ay caalamka nagu soo jeediyaan” .
Arrimaha Siyaasadda mar uu ka hadlayay waxa uu Xuseen sheegay in uusan jirin wax la yiraahdo Ra’iisul Wasaare ku xigeenka 1-aad, 2-aad iyo 3-aad, hase yeeshee uu isagu yahay ninka ku xiga Prof. Cali Maxamed Geeddi sida uu sheegay, waxaana uu caddeeyey in uu u qaabilsan yahay dhinaca Siyaasadda, waxaana warkaan ka soo xiganay xubno ka tirsan beesha Sacad oo kulankaas ka qeyb galay oo diiday in magacooda la xuso.
Madaxweyne C/qaasim Salaad Xasan intii uu talada hayay waxa uu ahaa nin si aada ah uga soo horjeeday in dowladdiisu ay wax dagaal ah la kulanto, isagoo baajiyey dagaallo dad fara badan ay ku dhiman lahaayeen oo ka dhici lahaa Muqdisho iyo gobollada kale ee dalka.
Magaaladda Boosaaso oo Lagu Gubey Xashiishad iyo Khamri March 2004
Saakay Subaxnimadii waxaa fagaaraha Tarbuunka isugu soo baxay dadweyne aad u fara badan oo doonayay in ay daawadaan qaabka loo gubayo ama loo bur-burinayo xashiish iyo Khamri fara badan oo laga keenay dalka Itoobiya, kaddib markii dhowaan howlgal ay sameeyeen Maxkamadaha Islaamiga ah ay ku guuleysteen in ay gacanta ku soo dhigaan Khamrigaasi, xashiishkaasi iyo dadkii ka ganacsanayay.
Markii la gubay Khamriga iyo Xashiishka ayaa dadweynihii daawanayay ay qaadday farxad iyo reyn-reyn, iyagoo ku dhawaaqayay ereyo ay ka mid ahaayeen “ALLAAHU akbar..”, “Itoobiya waxay dooneysaa in ay dhinac walba naga baabi’iso…iwm”.
Xubnihii halkaasi ka hadlay ayaa waxaa ka mid ahaa Guddoomiyaha Midowga Maxaaakiimta Dr. Sh. Shariif oo sheegay in dowladda Soomaaliya looga baahan yahay in Maxkamadaha Islaamiga gacan ku siiyaan sidii loo soo qaban lahaa kooxaha caadeystay in ay ka ganacsadaan ama cabaana maandooriyeyaasha, sidoo kale waxa uu soo jeediyey in ay dowladdu gacan ku siiso dhinaca nabadgelyada.
Waxaa kale oo halkaasi ka hadlay Ibraahim Cumar Sabriye Shaaweey oo sheegay in Maxkamadaha Islaamigu ay qabteen waxyaabo fara badan, loogana baahan yahay in Bulshadu ay gacan siiyaan.
“Itoobiya waxay dooneysaa in markii ay dhinac walba nagala dagaallantay ay haatan dooneyso in caqligana ay nagala dagaallanto” ayuu yiri Shaaweey, sidoo kale dadkii halkaa ka hadlay waxaa ka mid ahaa Sh. Nuur Baaruud oo sheegay in waxyaabaha daroogooyinku ay yihiin kuwa bulshada baabi’iya, kana dhiga kuwo aan jirin.
Khamrigii saakay halkaasi lagu gubay ayaa waxaa ka muuqatay calaamadaha dalka Itoobiya iyo in lagu sameeyey Magaallada Adis Ababa ee caasimadda dalka Itoobiya.
11 Ruux ayey ku dileen Ciidamada Itoobiya,350 Aqal Soomaalina way gubeen, tiro Geel, Lo’,Ari iyo Dameerona way ku layeen, waxay keloo buburiyeen Baraag lagu magcaabo Maxamuud Gacal oo ku tiilay meel 30 km u jirta Magaalada Baladweyne dhinaca Woqooyi Galbeed ee deegaanka Qodaxleey oo u dhow Xuduuda Soomaali iyo Itoobiya sida uu ii sheegay Xildhibaan Maxamed Xuseen Raage oo ka soo jeeda Gobolka Hiiraan kadib markii ay khadka taleefoonka kuwada xiriireen Xildhibaanka iyo Gudoomiyaha Gobolka Hiiraan Aadan Garaaso.
Xildhibaan Maxamed Xuseen Raage oo hadalka sii wata ayaa sheegay in aan la garanaynin sababta dhabta ah ee ka dambeysa oo ay ugu kaceen falkaas foosha xun Ciidamada Itoobiya, balse waxay ka mid tahay buu yiri ”Daan daansi dhulbalaarsi ah oo ay doonayso in ay ka fuliso Dowlada Itoobiya gudaha Soomaaliya ayey ka mid tahay oo ay ka waday mudooyinkii 15 Sano ee Dowlad la’aanta ay ka jirtay Soomaaliya”.
Xildhibaanku wuxuu kaloo sheegay in Dowlada Itoobiya ay ka mid tahay Dowladaha IGAD ee soo dhisay Dowladii FKMG ee Soomaaliya,taasoo weli si rasmi ah u shaqeynin in Itoobiya ay fara gelin ku soo sameyso Soomaaliya iyadoon jirin Dowlad ku soo duushay ama uusan weli dhex marin muran xaga xuduudda ah ayaa waxaa nasiib daro ah in ay gudaha Soomaaliya ku layso Dadd rayid ah oo xoolo dhaqato ah.
Xildhibaan Raage waxaa uu ku nuux nuuxsaday ha ogaato Itoobiya in Shacabka Soomaaliyeed uu is Difaacidoono goor ay ahaataba,waxaan Qaramada midoobay, Beesha Caalamka,Ururada Caalamiga ah,kuwa Dowliga ah iyo kuwa aan Dowliga ahayn iyo Ururada u Dooda Xuquuqda Aadanaha u sheegaynaa in ay wax ka qabtaan faragelinta ay ku hayso Dowlada Itoobiya gudaha Soomaaliya.
Waxaa saakey la doortay 11 xubnood oo noqon doona guddga fulinta ee isbahaysiga xoriyadda ra’yiga waxaana doorashadaan ay ka dhacday Hotel Saxafi oo ay ka qaybgaleen dhamaan qaybaha kala duwan ee bulshada iyo bahada saxaafadda, waxaana shir gudoominayay kulankasi C/daahir Diiriye iyadoo maalintii shalay ahayd la isku raacay dastuurka iyo axdiga uu yeelanaayo isbahaysigaasi.
Ugu dambeyntii waxaa la doortay 11 xubnood oo lix ay ka imaaneysay bulshada rayidka ah shantana ay ka imaaneysay saxaafadda, shanta saxaafad-una waxay kala yihiin Xasan Maxamuud Axmed (Xasan Fanax) oo matalayay wargeysyada, Axmed C/salaan oo ka socday Idaacadaha, C/maalik Yuusuf Maxamuud oo ka socday Web-Site-yada iyo labo gabdhood oo iyana ka socday bahda ururada suxufiyiinta ee haweenka kuwaas oo kala ah Raxmo Isaaq iyo Zamsam C/llaahi.
Ururada bulshada rayidka ah waxay kala yihiin Max’ed Nuur Gacal iyo C/nuur Xaaji Max’ed oo ka socday bahda waxbarashada, Nuurto Shiikh Max’ed oo ka socotay Hay’adda COCWO, Sahro Cumar Maalin oo ka socotay hay’adda INXA, Max’ed Muxiyadiin Shaatax oo ka socday hay’adda SOYDAN iyo Aamino Xaaji Cilmi oo ka socday SSWC
Warbixin Loogu magacdarey Xoriyada Caalamka Carbeed oo laga soo saarey Wadanka Jordan Maalinimadii Shaley ayaa daaha looga qaadey in ay jirto dhibaatooyin ba’an oo xaga Nolasha iyo Ra’iyiga.
Warbixintan oo ay diyaarisay Hay’ad lagu magacaabo Horumarinta Carabta oo fadhigeedu yahay Dalka Jordan ayaa waxaa lagu sheegay in 15 Wadan oo dhamaatood ah Dalal Carbeed ay ka jirto xaalado nolasha iyo fikirka, waxaana si gaar ah loogu soo qaatey Dalka Soomaaliya oo la sheegay in wixii ka dambeeyey sanadkii 1991-kii ay Dadka Soomaaliyeed 12% ay ku nool yihiin xaalad qalafsan oo aad u hooseysa.
Hay’addu warbixinteeda ay diyaarisay meelaha ay kaga hadashey Soomaaliya waxaa farta lagu fiiqey in Soomaaliya Haweenka intooda badan inaysan waxna qorin waxna aqrin Karin, waxayna Warbixintu intaasi raacisay in Haweenka Soomaaliyeed ay la kulmaan Ficilo ay ka mid yihiin Dil, Kufsi iyo Dhac, gaar ahaan kuwa ku jira Xeryaha Qaxootiga ee Wadamada Dariska la ah Soomaaliya.
Sidoo kale Warbixinta waxay sheegaysaa in Caruurta Da’da yare e Soomaaliyeed ay la tiicayaan Xanuuno badan oo ay ka mid tahay TB-da iyo waliba xaalado nafaqo dari ah, tiiyoo ay u sii dheertahay Waxbarasho la’aan iyo mugdi soo wajahi kara nolashooda.